को हुन् लिङदेन,जो लोकपृय मतका साथ राप्रपाको नेतृत्वमा पुगे ? Global TV Nepal
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन विजयी भएका छन् । आज आइतबार बिहान सम्पन्न मतपरिणाम अनुसार अध्यक्ष अर्का प्रत्यासी कमल थापालाई हराउँदै लिङ्देन विजयी भएका हुन् ।
लिङ्देनले १८१७ मत पाएका छन् भने थापाले १६१७ मत मात्र प्राप्त गरेका छन् । लिङ्देनले थापालाई २०० बढी मतान्तरले हराएर विजयी भएका हुन् । आखिर को हुन् त राजेन्द्र लिङ्देन ?
झापाको क्षेत्र नं ३ बाट २०७४ सालको आम निर्वाचनमा विजयी प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।
२०२२ साल भदौ २२ गते पाँचथरको अमरपुरमा सामान्य गरिब परिवारमा बुवा मानप्रसाद र आमा स्व.धनकुमारीको कोखबाट उनको जन्म भएको हो।
पछि उनको परिवार पाँचथरबाट झापाको हल्दिबारी गाउँपालिका–१ बसाई सरेका हुन् । लिङ्देन यसअघिको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपामा लगातार दुई कार्यकाल केन्द्रीय समितिका महामन्त्री थिए । राजनीतिशास्त्र र इतिहास विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका लिङ्देन बाबुको पथ पछ्याउँदै विद्यालय तहदेखि नै राजनीतिमा लागेका हुन्। उनका बुबा गाउँपञ्चायतकोे अध्यक्ष समेत बनेका थिए ।
लिङ्देनको शालीन र शिष्टु व्यक्तित्व र साङ्गठनिक कुशलताका कारण झापाका तीन स्थानमा उक्त दलले वडा तहको चुनाव जितेको छ ।
लिङ्देनले २०३६ सालदेखि राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलमा आबद्ध भई राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। उनी झापाको मेची क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठनको निर्वाचनमा पञ्चायत समर्थक विद्यार्थी सङ्गठन राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलका तर्फबाट अध्यक्ष पदमा उठेर हारेका थिए त्यो पञ्चायतको अन्तिम समय थियो ।
२०४९ सालमा राप्रपाको विद्यार्थी सङ्गठन बन्दा उनी संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका थिए । त्यस्तै उनी झापाको तत्कालीन गोल्धाप गाविसको वडा नं ३ वडाध्यक्ष भएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा लिङ्देन जिल्ला विकास समिति झापाको सभापति बनेका थिए। उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जिविस झापाको सभापतिमा मनोनयन गरेका थिए ।
२०६२ /६३ को जन आन्दोलनका बेला उनलाई झापाको बिर्तामोडमा राजावादी भएको आरोप लगाउँदै कालो मोसो दलिएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी कार्यकर्ताले उनको झापा गोल्धापमा रहेको घरमा आगजनी गरेका थिए । घर ध्वस्त भएपछि उनी परिवारसहित त्यहाँबाट विस्थापित भएर बिर्तामोडमा बसोबास गर्दै आएका थिए।
०६२/ ६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि उनले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा भने छोडेनन्। भाषणमा राजतन्त्र पुन स्थापना र हिन्दू राष्ट्रबारे उनले कडा अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
२०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेको समर्थनमा उनले नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरेका थिए।
लिङ्देनले उक्त निर्वाचनमा ४४,६१४ मत प्राप्त गरेको र उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सिटौलाले ३१,१७१ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ। उनी संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य पनि छन्। राप्रपाबाट देशैभरबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने लिङ्देन एक्ला सांसद हुन्।
यसपटक राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा उनी अध्यक्षको प्रत्यासी बनेर वर्तमान ३ अध्यक्षमध्ये एक कमल थापालाई पराजित गरे। उनलाई अर्का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको समर्थन थियो। स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचनमा राप्रपाबाट नेपालगन्जको मेयरमा विजयी धवलशमशेर राणाले पनि उनलाई समर्थन गरेका थिए।
रूखमा ठोकिएर मोटरसाइकल दुर्घटना ३ जनाको मृत्यु